အိပ်စက်နေရင်း အခြားသူတွေထံမှ အနှောက်အယှက်များခံယူကာ ၇နာရီအတွင်း ဒေါ်လာ ၁၆,၀၀၀ အထိ ဝင်ငွေရှာနိုင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား(ရုပ်သံ) - Mckzone Daily
အိပ်စက်နေရင်း အခြားသူတွေထံမှ အနှောက်အယှက်များခံယူကာ ၇နာရီအတွင်း ဒေါ်လာ ၁၆,၀၀၀ အထိ ဝင်ငွေရှာနိုင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား(ရုပ်သံ)
Posted By: Mia Mia March 7, 2021
သင်အိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာမှာ bug တွေကို ထားပြီး ဆူညံသံတွေကြား အိပ်ပျော်တတ်ပါသလား။ကောင်းပါပြီ ၊ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ အဲ့ဒီလို ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီး သူလုပ်ခဲ့သမျှအားလုံးဟာ အိပ်နေရင်း အင်တာနက်ပေါ်မှာ live လွှင့်ထားပစ်လိုက်တာပါဘဲ။ Twitch streamer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အဆိုပါအမျိုးသား Asia Andyဟာ တစ်ညတွင်းချင်း ဒေါ်လာ ၁၆,၀၀၀ ရရှိခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ကြည့်ရှုသူများအား သူ့ကိုနှိုးရန် ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အစီရင်ခံစာများအရ Andyဟာ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်များအား ခွေးဟောင်ခြင်းနှင့် ကျယ်လောင်တဲ့ဆူညံသံအမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့် အိပ်စက်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည့်အခြားနည်းလမ်းများစွာကို ပေးကာ ဝင်ငွေရှာခဲ့ပါတယ်။ YouTube မှာ subscribers ပေါင်း ၁ သန်းကျော်ရှိတဲ့ Andy ဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်တဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုတင်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ follower များက တေးဂီတဖွင့်ပြခြင်း ၊ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်း ၊ နှိုးစက်များကို ကျယ်လောင်စွာ ဖွင့်ကြပုံကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။၎င်းကို တိုက်ရိုက် live လွှင့်နေစဉ်အတွင်း စာသားမှ စကားပြောအသိအမှတ်ပြုခြင်းစနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ယခင်က Andy ဟာ Uber မောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး တစ်နာရီလျှင် ဒေါ်လာ ၁၆ သာရရှိခဲ့ပါတယ်။ယခုသူဟာ ၇ နာရီအတွင်း ဒေါ်လာ ၁,၆၀၀ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်း Los Angeles မြို့မှ အသက် ၂၆နှစ်အရွယ် Andy ဟာ အချိန်နည်းနည်းလေးနဲ့ ဝင်ငွေအများကြီးရှာနိုင်တဲ့အလုပ်ကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ သူ့ရဲ့အံ့အားသင့်မှုနှင့် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတို့က ပြောမပြနိုင်အောင် ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။
“ ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ် ၊ You guys … ဒေါ်လာ ၁၆,၀၀၀ ?.. ငါ Uber တစ်နာရီစာမောင်းမှ ဒေါ်လာ ၁၆ ဘဲရတာ ငါ Uber မောင်းလေ့ရှိတယ်၊ အဲ့တာနဲ့ ကျောင်းတက်နေရတာ ၊ အခုတော့ မင်းတို့က ငါ့ရဲ့ဘဝကို ကယ်တင်ပေးလိုက်ပြီ ဒါအတော်လေး ရူးသွပ်စရာဘဲ ” လို့ Andy က မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။များသောအားဖြင့် gamerတွေဟာ onlineမှ ဗီဒီယိုဂိမ်းများကို live-streaming အတွက် အသုံးပြုကြပြီး Twitch ဟာ အခြားအရာများအတွက်လည်း လူကြိုက်များပါတယ်။တကယ်တမ်း Asian Andy ဟာ platform အား အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ၎င်းအိပ်စက်ခြင်းအစီအစဉ်ကို ပထမဆုံးစတင်ခဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ Twitch Influencer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Ice Poseidon က အိပ်နေရင်း ၈နာရီအတွင်း ဒေါ်လာ ၅,၀၀၀ အထိ ဝင်ငွေရှာခဲ့ပါသေးတယ်။
သငျအိပျပြျောနတေဲ့နရောမှာ bug တှကေို ထားပွီး ဆူညံသံတှကွေား အိပျပြျောတတျပါသလား။ကောငျးပါပွီ ၊ အမြိုးသားတဈဦးဟာ အဲ့ဒီလို ဖွဈအောငျလုပျခဲ့ပွီး သူလုပျခဲ့သမြှအားလုံးဟာ အိပျနရေငျး အငျတာနကျပျေါမှာ live လှငျ့ထားပဈလိုကျတာပါဘဲ။
“ ဘုရားသခငျကို ကြေးဇူးအရမျးတငျတယျ ၊ You guys … ဒျေါလာ ၁၆,၀၀၀ ?.. ငါ Uber တဈနာရီစာမောငျးမှ ဒျေါလာ ၁၆ ဘဲရတာ ငါ Uber မောငျးလရှေိ့တယျ၊ အဲ့တာနဲ့ ကြောငျးတကျနရေတာ ၊ အခုတော့ မငျးတို့က ငါ့ရဲ့ဘဝကို ကယျတငျပေးလိုကျပွီ ဒါအတျောလေး ရူးသှပျစရာဘဲ ” လို့ Andy က မှတျခကျြပေးခဲ့ပါတယျ။
Be the first to comment on "အိပ်စက်နေရင်း အခြားသူတွေထံမှ အနှောက်အယှက်များခံယူကာ ၇နာရီအတွင်း ဒေါ်လာ ၁၆,၀၀၀ အထိ ဝင်ငွေရှာနိုင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား(ရုပ်သံ)"